काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका कार्डवाहकहरुले जनकपुरस्थित होटेल सिटिपार्क प्रालि जनकपुरमा विशेष छुट पाउने भएका छन्। सिटिजन्स बैंक र होटेल सिटिपार्कबीच बैंकका कार्डवाहकलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपश्चात सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहकले होटेल सिटिपार्कको स�...
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले बचतको बानी विकासका लागि प्रोत्साहन गर्न सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। भिडियोमा निकै रोचक ढंगले थोरैथोरै धेरै बचत गर्न सकिने सन्देश दिन खोजिएको छ। भिडियोमा एक बालक सामान किन्न भनेर घरबाट निस्किछन्। पसलमा पुगेर घरका लागि आवश्यक सामान किन्छन्। सामान किनिसकेपछि ती बालकले पसलेलाई रु....
काठमाण्डौ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले मोबाइल बैंकिङमार्फत सीआरएन तथा डिम्याट नम्बर विवरण हेर्ने सुविधाको सुरुआत गरेको छ। बैंकले आपm्ना बैंकिङ सेवाहरु मोबाइल फोन तथा वेब ब्राउजरका माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी ओम्नी च्यानलमा स्तरोन्नति गरेपश्चात यो सेवाको सुरुआत गरेको हो। यो सेवा प्रारम्भ भएसँगै प्राथमिक सेयर...
काठमाण्डौ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशका विभिन्न दुर्गम स्थलका बासिन्दालाई सर्वसुलभ तथा अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गरिरहेको छ। यसै क्रममा बैंकले दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकास्थित मुर्कुटीमा गत मंसिर ३ गतेबाट ८६ औँ शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रारम्भ गरेको छ। सो स्थानमा सेवा...
सिटिजन्स बैंकको कमलादीस्थित आफ्नै भवनबाट प्रिभिलेज बैंकिङ सेवा सुरु
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्ना प्रतिष्ठित ग्राहकहरुका लागि काठमाण्डौको कमलादीस्थित आफ्नै भवनमा काउन्टर विस्तार गरेको छ। यसअघि काठमाण्डौको नारायणहिटी पथस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा रहेको प्रिभिलेज काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहकलाई विशेष बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका साथै अबोपरान्त ग्राहकलाई छिटो,...
सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहकलाई सोवा हेल्थकेयरमा विशेष छुट
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र एकान्तकुनास्थित सोवा हेल्थकेयर सेन्टर प्रालिबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहकलाई विशेष छुट दिने समझदारी भएको छ। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपश्चात सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहकले सोवा हेल्थकेयरको सेवासुविधामा विशेष छुट पाउनेछन्। यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहक लाभान्वित हुने विश्वास...
चाडपर्वलक्षित सिटिजन्स बैंकले ल्यायो सन्देशमूलक भिडियो
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टेरनेसनलले चाडपर्वलाई लक्षित गरी सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले तिहार र छठ पर्वका अवसरमा सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको हो। भिडियोमा तिहार, नेपाल संवत र छठ पर्वका विशेषताहरुको वर्णन गरिएको थियो। तिहारका हरेक दिन कागपूजा, कुकुरपूजा, लक्ष्मीपूजा, गोबर्द्धन पूजा, नेपाल संवत, म्हपूजा र...
सिटिजन्स बैंकद्वारा कात्तिक १६ गते एजीएम आह्वान, के के छन् प्रस्ताव ?
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमीटेडले आगामी कात्तिक १६ गते आफ्नो १५ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंकको असोज २५ गते बसेको संचालक समितिको ३८० औं बैठकले कात्तिक १६ गते मंगलबार बैंकको प्रधान कार्यालय रहेको भवनमै १५ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । साधारणसभा साँझ ४ बजेदेखि सुरु हुने सूचनामा...
सिटिजन्स बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई लस्कर फुड्समा विशेष छुट
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र काठमाण्डौको पक्नाजोलस्थित लस्कर फुड्स एन्ड डेलिभरि सर्भिसेस प्रालिबीच सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त सम्झौतापश्चात सिटिजन्स बैंकका मोबाइल बैंकिङ ग्राहक एवं कर्मचारीले लस्कर फुड्सका विभिन्न सेवाहरुमा विषेश छुट पाउनेछन्। यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका...
आजसम्म कायम सेयरधनीले सिटिजन्स बैंकको १६% लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज (असोज २० गते) अन्तिम मौका रहेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको गत असोज १२ गते बसेको बैठकले आगामी १५ औँ वार्षिक साधारणसभा र लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि यही असोज २२ गते १ दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज असोज २०...
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई लुजा मेक अप स्टुडियोमा विशेष छुट
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र काठमाण्डौको पुतलीसडकस्थित लुजा मेक अप स्टुडियो एन्ड स्किन केयर प्रालिबीच सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त सम्झौतापश्चात सिटिजन्स बैंकका डेबिट, क्रेडिट तथा प्रिभिलेज कार्डवाहक ग्राहक एवं कर्मचारीले लुजा मेक अप स्टुडियो एन्ड स्किन केयरको विभिन्न सेवामा...
सिटिजन्स बैंकको ओम्नी च्यानलमा आधारित डिजिटल बैंकिङ सेवा सुरु, यस्ता छन् सुविधाहरु
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ओम्नी च्यानलमा आधारित डिजिटल बैंकिङ सेवाको सुरुआत गरेको छ। बैंकले आफ्ना बैंकिङ सेवाहरु मोबाइल फोन वा वेब ब्राउजरका माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी यो सेवाको सुरुआत गरेको हो। हालको मोबाइल बैंकिङ एपलाई स्तरोन्नति गर्दै बैंकले सिटिजन्स बैंकमा खाता भएका एवं नभएका ग्राहकलाई समेत...
सिटिजन्स बैंकको सेयर दीर्घकालीन लगानीका लागि देखियो उपयुक्त (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरुमध्ये एउटा हो, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड। बैंकले रेमिट्यान्स, निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहलगायतका बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। बैंकका राजधानी तथा राजधानीबाहिर गरेर १९१ वटा शाखा छन्। बैंकको आफ्नै क्यापिटल पनि छ। आधारभूत पक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो...
सिटिजन्स बैंकको लाभांश पाउन कहिलेसम्म बन्नुपर्छ सेयरधनी ?
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो मंगलबार बसेको बैठकले आगामी १५ औँ वार्षिक साधारणसभा र लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि यही असोज २२ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ असोज २० गतेसम्म (असोज २१ गते घ...